लव बाइटले गर्दा बद्नाम भएका बलिउड सेलिब्रिटीहरु
बलिउड । बलिउड सेलिब्रिटीहरु आफ्नो पसर्नल लाइफका बारेमा कमै बोल्ने गर्छन् । रणवीर र दीपिका पादुकोण बाहेक अरु सेलिब्रिटीहरु आफ्नो लव लाइफका बारेमा भने आज पनि गुपचुप रहने गरेका छन् ।
मिडियाको क्यामेराबाट पर्सनल लाइफलाई लुकाउँदै लव अफयेर गरिरहेका बलिउड सेलिब्रिटीहरुको लव बाइटका कारण पनि ठुलै चर्चा हुने गरेको छ ।
शाहरुख खानदेखि सलमान खान, करीना देखि प्रियंका चोपडा जस्ता सेलिब्रिटीहरुको लव बाइट मिडियाको क्यामरामा कैद भएका छन् । आउनुहोस हेरौ चर्चीत बलिउड सेलिब्रिटीका लव बाइट कहाँकहाँ छन् त ?
बलिउडमा शाहरुख खानको रोमान्सबारे धेरैलाई थाहा छ । रोमान्समा मामिलामा उनको अगाडि अरु सेलिब्रिटीहरु पनि पछि पर्छन् । उनी फिल्मी लाइफमा जति रोमान्टिक छन् त्यो भन्दा बढी रोमान्टिक रियल लाइफमा पनि रहेका छन् । यसको प्रमाण हो यो तस्बिर ।
शाहरुख खानको यो फोटो फिल्म ‘ह्याप्पी न्यु इयर’ भन्दा पहिलाको हो । शाहरुख खान सुटिङका लागि मुम्बइ जादै गर्दा केही फोटोग्राफरले उनको तस्बिर लिएका थिए । पछि उनको तस्बिर नियाल्दा लव बाइट देखिएको थियो ।
सलमान खान आफुलाई भर्जिन भन्न रुचाउँछन् । तर उनको गर्दनमा भएको लव बाइटले अर्कै कुरा बताउँछ । सलमान खानको लव अफयेरको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छ । कति सेलिब्रिटीसँग विवाहको कुरा भएपछि विवाह भने हुन सकेन ।
साहिद कपुरलाई चट्ट छोडेर सेफ अली खानको श्रीमती बनेकी करीनको व्याकमा लव बाइट भेटिएको थियो । उनको व्याकमा नङले बनाएको घाउका कारण पनि उनी खुब ठुलो चर्चामा आएकी थिइन् ।
बलिउडकी जंगली बिल्लीको रुपमा परिचीत प्रियंका चोपडा सिंगल रहेको बताउँदै आइरहेकी छिन् । उनको गर्दनमा देखिएको निशानले भने अर्कै कुरा व्यक्त गरेको थियो । उनको यो निशानका कारण धेरै दिनसम्म उनी चर्चामा रहेकी थिइन् । उनको गर्दनमा भएको निशान लव बाइट नै थियो तर कसको भन्नेबारे धेरै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
५ सैफ अली खान
करीनाको लव वाइट हुने, सैफ पछि छुट्ने कुरा त कदापि हुनै सक्दैन । उनको गर्दनमा पनि लव बाइट स्पट भएको थियो ।
यो लव वाइट त्यतिखेरको हो जब उनी करीना कपुरसँग लव अफयेरमा थिए । लव बाइटबारे उनलाई सोध्दा उनले हाँसेर टारेका थिए ।
६. कटरीना कैफ
सलमान खानलाई छोडेर रणवीर कपुरसँग लव अफयेर गरेकी कटरीना तब चर्चामा आइन् जब उनको गर्दनमा लव बाइट मिडियाको क्यामराले कैद गर्यो । रणवीर कपुरसँग डेटिङ गरिरहेको अवस्थामा कटरीनाको गर्दनमा लब बाइट भएको एउटा तस्बिर मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धबारे मिडियामा ठुलो चर्चा भएको थियो ।
७. अली फैजल
एउटा इभेन्टमा उनीसँग मिडियाले गर्ने कुराकानीमा उनको गर्दनमा रहेको लव बाइट मिडियाको क्यामरामा कैद भएको थियो । एकजना मिडियाकर्मीले यसबारे उनलाई सोधे पनि तर उनले हाँसे मात्र जबाफ भने दिएनन् ।